Ahlu-Sunah Waljameeca oo eedaysay xafiiska QM ee UNPOS – Radio Daljir
Ahlu-Sunah Waljameeca oo eedaysay xafiiska QM ee UNPOS
Febraayo 19, 2012 12:00 b 0
Nairobi,Feb 19 -Maamulka Ahlu-Sunah Wal-jameeca ee maamula gobolada dhaxe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa shir saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa ay kaga hadleen fara-galin ay sheegeen inuu ku hayo xafiiska siyaadda QM Soomaaliya ee UNPOS.
Kulanka oo ay joogeen masuuliyiinta ay ka mid yihiin Xoghayaha Guud Ahlu-Sunnah Sheekh Xasan Maxamed Garaad, gudoomiyha guud ee Ahlu-sunah waljamaaca Sheekh Caydaruus Sayid Axmed iyo xubno kale.
Xoghayaha guud ee Ahlu-Sunah Waljamaacada Sheekh Xasan Maxamed Garraad oo ka hadlay shirka ayaa waxaa uu ku dheeraaday sababtii loo unkay maamulka Ahlu-Sunah Waljamaaca,isagoona sheegay unkidda maamulka Ahlu-Sunah inuu ka dambeeyay kadib markii ay ka dhiidhiyeen talaabooyin uu ururka Al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya ku diiday in la xuso nabigeyna Muxameed NNKH iyo arimo kale oo soo jireen ka ahaa bulshada Soomaaliyeed oo ay diinteeda ku waynaynayeen,tillaabooyinka Al-Shabaab ay qaadayn kadib ayuu sheekhu tilmaamay inay keentay inay dagaalamaan.
Gudoomiyaha guud ee Ahlu-sunah Waljaamaca Sheekh Caydaruus Sayid Axmed ayaa isaguna farriin u diray beesha caalamka oo ku wajahan inaysan jirin maamul Ahlu-Sunah katirsan oo iyagu ka madxabanaan,isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu ka digay dad uu tilmaamay inay sheegtaan AhluSunah si’ay uga qaybgalaan shirarka arimaha Soomaaliya looga hadlayo.
Gudoomiyaha ayaa dhanka kale uga digay Xafiiska QM ee Soomaaliya UNPOS faragalin uu sheegay inuu ku hayo maamulka Ahlu-Sunah.
“Waxaan rabnaa inay ogaadaan xafiiska QM ee wakiilka uga ah Soomaaliya ee UNPOS oo iyagu si aan ka fiirsi lahayn uga samayso inay arimahayaga faraha la gasho”ayuu yiri gudoomniyaha Ahlu-Sunah Waljamaaca Sheekh Caydaruus Sayid Axmed.